Iingcamango nezindlela zokuNceda ngokuBhala
Inkqubo yokubhala iqulethwe ngamanani amabakala abalulekileyo: ukubhala kwangaphambili, ukuyila, ukuhlaziywa, nokuhlela. Ngeendlela ezininzi, ukubhala kwangaphambili kubaluleke kakhulu kula ma nyathelo. Yilo xesha umfundi enquma isihloko abhala ngaso, i-angle ayithathayo, kunye nabaphulaphuli abajolise kuyo. Kwakhona lixesha lokuba benze isicwangciso esenza kube lula ngabo ukuba babhale ngokucacileyo ngokuchanekileyo ngesihloko sabo.
Kukho iindlela ezininzi abafundi abangakwazi ukujamelana nesigaba sokubhala sokubhala inkqubo. Ezi zilandelayo ziindlela ezimbalwa eziqhelekileyo kunye nezicwangciso abafundi abangayisebenzisa.
I-brainstorming- Brainstorming yinkqubo yokuza neengcamango ezininzi kangangoko kunokwenzeka ngesihloko ngaphandle kokukhathazeka malunga nokufezeka okanye ukuba ingcamango iyinto engokoqobo okanye ayikho.
Ukuzikhethela - Esi siqhinga xa abafundi bakho babhala nantoni na engena engqondweni yabo ngesihloko esisondeleyo kwisixa esithile sithuba, njengemizuzu eyi-10 okanye imizuzu eyi-15. Abafundi akufanele bakhathazeke ngegrama, iziphumlisi okanye isipelingi njengoko babhala. Kunoko, kufuneka bazame kwaye bafike ngeengcinga ezininzi njengoko banako ukubanceda xa befika kwinkqubo yokubhala.
Ingqondo Iimephu - Iimephu zengqondo zibonisa indlela yokubonisa ulwazi. Kukho iintlobo ezininzi zeemephu zengqondo ezinokuba luncedo njengabafundi basebenza kwisigaba sokubhala. I-Webbing isixhobo esikhulu esinabantwana abhala igama phakathi kwiphepha lephepha. Amagama afanayo okanye amabinzana adibaniswa yimigca kweli gama eliyintloko kweli. Bakhela kwingcamango ukuze, ekugqibeleni, umfundi ufumane ubutyebi beengcamango ezixhomekeke kule ngcamango ephambili. Ngokomzekelo, ukuba isihloko sephepha kwakuyindima yomongameli wase-US, umfundi uya kubhala oku phakathi kwiphepha. Emva koko xa bacinga ngendima ngayinye eyenziwa ngumongameli, banokubhala phantsi kwisangqa edibene nomgca kule ngcamango yokuqala. Kule miqathango, umfundi angenzela iinkcukacha ezisekelayo. Ekugqibeleni, babe ne-nice pamp road ukuya kwisincoko kwesi sihloko.
Ukudweba / Ukwenza i-Doodling - Abanye abafundi basabela kakuhle kwingcamango yokukwazi ukudibanisa amagama kunye nemidwebo njengoko bacinga malunga noko bafuna ukubhala kwisigaba sokubhala. Oku kunokwenene ukuvula imigca yokudala yokucinga.
Ukubuza imibuzo - Abafundi bavame ukuza neengcamango ezingakumbi ngokusebenzisa umbuzo. Umzekelo, ukuba umfundi kufuneka abhale ngendima kaHeathcliff kwiiWuthering Heights , bangase baqale ngokuzibuza imibuzo ethile ngaye kunye nezizathu zokuzonda kwakhe. Bangase babuze indlela umntu 'oqhelekileyo' angasabela ngayo ukuze aqonde kangcono ubunzulu beentlungu zikaHeathcliff. Ingongoma kukuba le mibuzo ingamnceda umfundi afunde ukuqonda okujulileyo kwesihloko ngaphambi kokuba baqale ngokubhala isicatshulwa.
Ukucacisa - Abafundi bangasebenzisa iziqendu zemveli ukuze bancede bahlele iingcamango zabo ngendlela engqiqo. Umfundi uya kuqala ngesihloko ngokubanzi aze abhale iingcamango zabo ngeenkcukacha ezisekelayo. Ku luncedo ukubonisa abafundi ukuba iinkcukacha zabo ezicacileyo zivela ekuqaleni, kulula ukuba kubhala kwabo iphepha.
Uninzi lwabafundi baya kufumana ukuba ukudibanisa ezimbini zezi zicwangciso zisebenza kakuhle ukubonelela ngesiseko esihle semveliso yazo yokugqibela. Enyanisweni, ukuba umfundi uqala ukubuza imibuzo, ngoko udala i-web, kwaye ekugqibeleni ubhale inkcazo ecacileyo, baya kufumana ukuba ixesha elibhekise phambili liza kuhlawula ngephepha elilula ukubhala elifumana ibanga eliphezulu ekupheleni.
Iimpawu eziphezulu zokuba nguMfundisi ophumelelayo
I-Pros and Cons to the Flexible Grouping kwi-Middle and High School
5 Izinto eziphambili ze-Math Math Method
Euphuism (iprose Style)
5 Iimpapasho zokuhamba ukuze ubone iindawo ezilungileyo kwiItali
Indlela Yokuthetha Iintsikelelo zeHaMotzi
Bindi: I-Great Indian Forehead Art